I-Semrush iphucula uKhuphiswano ukuHlawula ngokuCofa uHlaziyo | Martech Zone
I-Semrush iphucula uKhuphiswano ukuHlawula ngokuCofa uHlaziyo
NgoLwesithathu, Julayi 24, 2013 NgoLwesithathu, Julayi 24, 2013 Douglas Karr
Besingabalandeli kunye nabanxulumene nabo Semrushiminyaka emininzi ngoku. Baqhubeka nokunyusa iminikelo yabo kunye nokwandisa amandla abo okubamba idatha, ukubonelela ngengqondo engakholelekiyo ekubonakaleni kweinjini zabathengi bethu. Kutshanje, Semrush eyandisiweyo yabo Hlawula ngokucofa ingxelo nganye -Ukubonelela ngomfanekiso ocacileyo kunye nembali yeenkampani okhuphisana nazo kwintengiso yeinjini yokukhangela ehlawulelweyo.
Nazi izinto eziphambili zokwenza ingxelo yokuphucula iAdsense:
Umkhwa oqhelekileyo weAdsense -Oku kuyanceda ukuba uchonge ukuba abo ukhuphisana nabo bayayisebenzisa i-Adsense okanye hayi kwaye ubonelele ngokuqonda imisebenzi yabo yexesha elidlulileyo.
Uhlobo lweeNtengiso ezikhuphisanayo zisebenzisa Itshathi yepayi izisa idatha ekuboneni malunga neeNtengiso ezisebenzisana kakhulu nabantu okhuphisana nabo. Ngokucofa kuhlobo olunye lwentengiso uya kuthunyelwa kwingxelo eneenkcukacha.
Uluhlu lweeNdawo apho kupapashwa khona iiNtengiso -Khangela iiwebhusayithi ezisetyenziswa ngabantu okhuphisana nabo ukukhuthaza iAdsense yabo, ungabona ingxelo eneenkcukacha kunye nenani leeNtengiso eziboniswe kwiwebhusayithi nganye.
Phanda iitekisi zoKhuphiswano -Funda ukuba zeziphi izicatshulwa ezipapashwa ngabakhuphisana nabo kwi-Adsense, bebe ezona ndlela zilungileyo, kwaye uziqhelanise nephulo lakho elizayo.
Phanda uKhuphiswano kumajelo eendaba -Ngoku ungazi ngokuthe ngqo ukuba loluphi uhlobo losasazo abakhuphisana nabo 'kwaye ungabona ukuba zeziphi iimveliso ezibhengezwayo kwiibhena zabo.
Hlaziya uKhuphiswano lokufika kwamaphepha -Funda ngakumbi malunga nokufika kwamaphepha okhuphiswano ukunyusa ukusebenza kweAdsense. Kwi SemrushKukwanakho nokukwazi ukumisela ezona zithandwa kakhulu.
tags: iintengiso ezikhuphisanayoUhlalutyo lokhuphiswanofumana abakhuphisana ne-ppcmaphephaiintengiso zokukhangela ezihlawulelweyoiintengiso zombhalo ezihlawulelweyoppc iintengiso ezikhuphisanayoiphepha lokukhuphisana lamaphepha okufikaabakhuphisana ne-ppcingxelo ye-ppciintengiso zombhalo
Ii-3 S zoMxholo oPhumeleleyo
Ulujonga njani ukuThengisa uMxholo?
Mar 5, 2014 ngo-4: 15 AM
Ndithethile neenkampani ezininzi zePPC, kodwa eyona nto ibalulekileyo onokuthi uyenze kwiphulo lakho lokuthengisa ngamaphepha okufika. Zama le nkampani iziphumo eziqhutywa, bafowunele 256-398-3835. Bayeyona nkampani ilungileyo yokuthengisa onokuthi uhambe nayo kuba abakwenzeli nje amaphulo aqinileyo e-ppc, kodwa bakwenza namaphepha okufika, i-CRO kunye nokuthengisa kwakhona ayi-100% yezinto eziyimfuneko zephulo lokuthengisa eliyimpumelelo kwi-Intanethi. Uninzi lweenkampani zithengisela into enye enje nge CRO, okanye iPPC nje, okanye nje ii popups, njl kwintengiso ye-intanethi, udinga yonke ipakethe, kwaye emva koko uphucule / ulungele ukusuka apho.